မြှင့်တင်ရန်မိုဘိုင်းသည်တစ်လလျှင်ဒေါ်လာ ၅၀ နှုန်းဖြင့်ကြိုးမဲ့အစီအစဉ်သစ်ငါးခုကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်
အဓိက သတင်းနှင့်သုံးသပ်ချက်များ Boost Mobile သည်တစ်လလျှင်ဒေါ်လာ ၅၀ နှုန်းဖြင့်ကြိုးမဲ့အစီအစဉ်သစ်ငါးခုကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်
Boost Mobile သည်တစ်လလျှင်ဒေါ်လာ ၅၀ နှုန်းဖြင့်ကြိုးမဲ့အစီအစဉ်သစ်ငါးခုကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်
Boost Mobile သည် Dish Wireless မှပိုင်ဆိုင်ပြီးတစ်လလျှင်ဒေါ်လာ ၅၀ ဖြင့်ကြိုတင်ငွေဖြည့်အစီအစဉ် ၅ ခုကိုကြေငြာခဲ့သည်။ အစီအစဉ်သစ်ငါးခုအနက်တစ်ခုသည် Boost & apos; s ၏ '$ hrink-It!' ၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည် အချိန်ပေးငွေပေးချေမှုခြောက်ခုပြုလုပ်ပြီးနောက်တွင်လစဉ်နှုန်းထားကိုတစ်လဒေါ်လာ ၁၀ အထိလျော့နည်းစေသည်။ တစ်လလျှင်ဒေါ်လာ ၄၅ ဒေါ်လာဖြင့်စတင်မည်ဖြစ်ပြီးမြန်နှုန်းမြင့်အချက်အလက် 15GB နှင့်အတူအကန့်အသတ်မရှိစကားပြောမည်၊ ထိုဒေတာများအားလုံးကိုအသုံးပြုသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်စာရင်းပေးသွင်းသူသည်ဒေတာကိုရယူနိုင်ဆဲဖြစ်သော်လည်း 2G အမြန်နှုန်းဖြင့်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းအစီအစဉ်သည်ဖောက်သည်များအားမိုဘိုင်းဟော့စပေါ့ကိုအသုံးပြုရန်စွမ်းရည်ကိုပေးသည်၊ သို့သော်၎င်းသည်လစဉ်ဒေတာ၏သုံးစွဲသူ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုလောင်လိမ့်မည်။ အချိန်မှန်ငွေပေးချေမှုသုံးခုပြုလုပ်ပြီးလျှင်အစီအစဉ်နှင့်လစဉ်စျေးနှုန်းကိုဒေါ်လာ ၄၀ အထိလျှော့ချသည်။ အချိန်မီငွေပေးချေမှုသုံးခုထပ်မံရရှိပြီးသည်နှင့်အစီအစဉ်၏စျေးနှုန်းသည်တစ်လလျှင်နောက်ထပ် ၅ ဒေါ်လာသို့ဒေါ်လာ ၃၅ သို့ကျသွားသည်။
oost Mobile & s အသစ်အစီအစဉ်များကိုတစ်လလျှင်ဒေါ်လာ ၅၀ အောက်သာရှိသည်
အခြားအစီအစဉ်များအားလုံးတွင်အကန့်အသတ်မရှိသောစကားပြောစာသားနှင့်မိုဘိုင်းဟော့စပေါ့ဆက်သွယ်မှုကိုပါဖော်ပြထားသည်။ တစ်လကိုဒေါ်လာ ၃၅ ဒေါ်လာမြန်နှုန်းမြင့်အချက်အလက် ၁၀ ဂစ်၊ တစ်လ ၂၅ ဒေါ်လာပေးရမှာကတော့ ၅ ဂစ်နှုန်းမြန်နှုန်းဒေတာနဲ့ ၁၅ ဒေါ်လာတစ်လနဲ့ ၁၀ ဒေါ်လာနှုန်းဟာဖောက်သည်တွေကို ၂ ဂစ်နဲ့ ၁ ဂစ်နှုန်းမြန်နှုန်းဒေတာကိုပေးတယ်။ ဤအစီအစဉ်များ ('$ hrink-It' အစီအစဉ်မပါ ၀ င်ပါ) ဆိုလိုသည်မှာမြန်နှုန်းမြင့်ဒေတာများအားလုံးကိုသုံးစွဲပြီးနောက်စားသုံးသူသည်အချက်အလက်ထပ်မံဝယ်ယူရန်သို့မဟုတ်လာမည့်ငွေတောင်းခံသံသရာစတင်ရန်စောင့်ဆိုင်းရမည်ဖြစ်သည်။
Boost သည်သုံးစွဲသူများအားအောက်ပါနှုန်းထားများဖြင့်ထပ်ဆောင်းအချက်အလက်များကို ၀ ယ်ယူရန်အခွင့်အရေးပေးထားသည်။
1GB မြန်နှုန်းမြင့်ဒေတာအတွက်ဒေါ်လာ ၅ ဒေါ်လာ
2GB မြန်နှုန်းမြင့်ဒေတာအတွက်ဒေါ်လာ ၁၀ ဒေါ်လာ
ဒေတာကိုအမှန်တကယ်ဆာငတ်နေသော Boost မိုဘိုင်းသုံးစွဲသူများသည်အကန့်အသတ်မရှိသောဒေတာ (အမြန်နှုန်း ၃၅ ဂစ်ဒေတာ)၊ ဟောပြောခြင်းနှင့်စာသားများပါ ၀ င်ပြီး ၁၂ ဂစ်မိုဘိုင်းဟော့စပေါ့အချက်အလက်နှင့်အတူလစဉ်ဒေါ်လာ ၅၀ ပေးဆောင်နိုင်သည်။ တစ်လလျှင်ဒေါ်လာ ၆၀ စျေးနှုန်းအတွက်အကန့်အသတ်မရှိသောအစီအစဉ်သည်အထက်ပါအားလုံးပါ ၀ င်သော်လည်းဒေါ်လာ ၅၀ အစီအစဉ်တွင်ရရှိသော SD စီးဆင်းမှုများနှင့်ဆန့်ကျင်။ အကြောင်းအရာများသည်ပိုမိုမြန်ဆန်သော HD မြန်နှုန်းဖြင့်စီးဆင်းသည်။ သုံးစွဲသူများသည်၎င်းတို့သတ်မှတ်ထားသည့် ၃၅ ဂစ်မြန်မြန်နှုန်းဒေတာကိုအပြီးသတ်သုံးစွဲရန်စီစဉ်သည့်အခါဒေတာအမြန်နှုန်း 2GB သို့ကျဆင်းသွားသည်။
အဖွဲ့ဥက္ကpresident္ဌလက်လီကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီဖြစ်သည့် Dish မှ COO ဥက္က္ဌဂျွန်ဆဗီရီရာက 'ဘတ်ဂျက်နှင့်လူနေမှုပုံစံအမျိုးမျိုးနှင့်ကိုက်ညီသောယုံကြည်စိတ်ချရသောကြိုးမဲ့ရွေးချယ်မှုများကိုယခင်ကထက် ပို၍ အရေးကြီးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝယ်ယူသူများအတွက်ပိုက်ဆံပြန်ထည့်နေစဉ်ကျွန်ုပ်တို့ပိုမိုရွေးချယ်မှုနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်မှုများကိုပြန်လည်ပေးအပ်ခြင်းအားဖြင့်လူတိုင်းသည်သူတို့၏တစ် ဦး ချင်းလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးသည့်ကျွန်ုပ်တို့၏အသစ်သောဆန်းသစ်သောရွေးချယ်စရာများနှင့်ဆက်နွှယ်နေရန်အာမခံနိုင်သည်။
t ကို moble အသစ်ဖုန်းများ
at & t ကိုနဂါးငွေ့တန်း s7 သဘောတူညီချက်မှာ
အဟောင်း scrolls ဒဏ္andာရီ android လွှတ်ပေးရန်
Apple iPhone 8 Plus နှင့် Samsung Galaxy S8 + တို့ဖြစ်သည်
FaceTime သည် iOS 15 ဖြင့်စွမ်းဆောင်ချက်အသစ်များကိုရရှိသည်။ Android အသုံးပြုသူများသည် FaceTime ခေါ်ဆိုမှုများတွင်ပါဝင်နိုင်သည်
iPhone SE2ဒီနှစ်ထွက်မလာသေးပါဘူး
အပေးအယူ: Samsung Gear S3 ၏နယ်စပ်တွင်ဒေါ်လာ ၁၀၀ အထိ (၃၀% လျှော့) အထိသိမ်းဆည်းပါ
အကောင်းဆုံး Apple iPad 8 မျက်နှာပြင်အကာ
iPhone Gmail မှသတိပေးချက်များအလုပ်မလုပ်ဘူးလား ဒီနေရာမှာဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲ
Moto Z Force Droid နှင့် Apple iPhone 6s Plus တို့ဖြစ်သည်
Samsung Galaxy Tab S7 ကို Amazon တွင်ဒေါ်လာ ၂၀၀ လျှော့စျေး
Apple Watch vs Moto 360 နှင့် LG G Watch R vs Samsung Gear S: နှိုင်းယှဉ်ချက်များ
iPhone X (2018) နှင့် iPhone X Plus ထွက်သည့်နေ့နှင့်စျေးနှုန်း? ကျွန်ုပ်တို့၏မျှော်လင့်ချက်များ ...